သူတို့၏ ခေါက်ဆွဲပြုတ် ramen | Working Friends
သူတို့၏ ခေါက်ဆွဲပြုတ် ramen
2017年12月18日 2018年9月21日 EM
Ramen ဆိုတာ ဘာလဲ။ရှင်းရှင်းပြောရရင် ခေါက်ဆွဲရည်ဖျော်လို့ ပြောရမလားပဲ။
Ramen က ဂျပန်ရိုးရာအစားအစာ မဟုတ်ပါဘူး။‘ဂျပန်မဟုတ်လား။’ လို့တွေးမိတဲ့သူလည်းရှိမှာပါ။ ဂျပန်လူမျိုးထဲမှာတောင် ဂျပန်အစားအစာဆိုပြီး ထင်တဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်တဲ့။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း အရင်က ဂျပန်အစားအစာထဲမှာ ဘာကြိုက်လဲလို့ အမေးခံရဖူးတယ်။အဲ့တုန်းက ramen ဆိုပြီး ဖြေလိုက်တာပေါ့။ ဖြေလိုက်တော့ ramen က ဂျပန် မဟုတ်ဘူးလေ လို့ ပြန်အပြောခံရဖူးပါတယ်။တကယ်က တရုတ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကနေ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ Japanese soup noodles ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောမယ်ဆို ဂျပန်မှုပြုထားတာပေါ့။
Ramen အမျိုးမျိုးရှိတာ သိပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ Ramen မှာ အရသာ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒေသအလိုက် ထွင်ထားတဲ့ ရာမန်အပြင်၊ အဓိက ကွဲပြားတာကတော့ ‘ဟင်းရည်’ဖြစ်ပါတယ်။
ဟင်းရည်မှာ (၄)မျိုး ရှိပြီး
醤油ラーメン( shoyu ) ပဲငံပြာရည် အရသာ
塩ラーメン ( shio ) ဆားအငန် အရသာ
味噌ラーメン ( miso ) ပဲအနှစ် အရသာ
豚骨ラーメン( tonkotsu ) ဝက်ရိုးပြုတ် အရသာ
ဒီလေးမျိုးအပေါ်အခြေခံပြီး ဒေသအလိုက် အနည်းငယ်ကွဲပြားသွားတာပါ။
ဥပမာ- tonkotsuဆိုပေမဲ့ ယိုကိုဟားမားမှာတော့ ရေညှိဖတ်ပိုပါပြီး၊ ဟကတမှာတော့ မုန်ညင်းချဉ်ပိုပါတာမျိုးပေါ့ ။ဒေသအလိုက် ရာမန်တွေကို ကြည့်ရင်
နာမည်ကြီးတာ19မျိုးတောင် ရှိတယ်နော်။ တကယ်တမ်း ဒီထက်ပိုများပါတယ်။စိတ်ဝင်စားရင် ရှာပြီးစားကြည့်ကြပါ။
Ramen က ၁၄၈၈ခုနှစ်မှာ chukamen (တရုတ်ခေါက်ဆွဲ)အနေနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံကို စဝင်လာပါတယ်တဲ့။
ထိုစဉ်က သိပ်မစားကြပေမဲ့၊ ကမ္ဘာစစ်ပြီးခေတ်မှာတော့ ဒေသတိုင်းလိုလို အစားများလာပြီး၊ ရာမန်ဆိုင်တွေလည်းပေါများလာတာပေါ့။ ဒေသတိုင်းမှာ တွင်ကျယ်လာတော့ အရသာလည်း တဖြည်းဖြည်းကွဲလာတာ။ ဂျပန်မှုပြုတာ တွင်ကျယ်လာတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။
နောက်ပိုင်း ၁၉၅၈ခုနှစ်မှာ အသင့်စားရာမန် ထုတ်လုပ်လာနိုင်ပြီး(စကားမစပ် အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်ပေါ်လာတာက ဂျပန်က ပထမဦးဆုံး စတင်ထွင်လိုက်တာပါတဲ့)၊ ဒေသတိုင်းမှာတော့ မိမိဒေသရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အရသာများ တီထွင်လာကြပါတယ်။ ဒေသတိုင်းလိုလို ကိုယ်ပိုင်အရသာ ရှိတယ်နော်။
အသေးစိပ်ကိုသိချင်ရင် ရာမန်ပြတိုက်လည်းရှိလို့ အချိန်ရရင် သွားကြည့်ကြည့်ပါနော်။ Shin-yokohamaမှာ ရှိပါတယ်။ အသင့်စားရာမန် ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ပြတိုက်လေးပါ။ နာမည်က Ramen hakubutsukan (nick name က Ra-haku) ပါတဲ့နော်။
ရာမန် ကို အစားများဆုံးက ဘယ်သူတွေများ ဖြစ်မလဲ။
အစားများတာကတော့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေများပါတယ်။ မြန်လည်းမြန်ပြီး အရသာရှိတဲ့အပြင် ဈေးနှုန်းကလည်း ယန်း၁၀၀၀အောက် ဖြစ်ပါတယ်။ စားရတာ တန်တယ်လေ။ထူးဆန်းတာတစ်ခုက ရာမန်ဆိုင်သွားတိုင်းတွေ့ ရတာက ယောက်ျားလေးတွေ များတာပါပဲ။ salary-man တို့ အကြိုက်လို့ ပြောရမှာပေါ့နော်။
ကျွန်ုပ် စားဖူးသော ရာမန်!
ကျွန်မကတော့ နေ့လည်စာနှင့် ညစာမှာ ရာမန်သွားစားလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဆိုင်မဆို ယန်း၁၀၀၀အောက် ကုန်ကျပြီး၊ ပုံမှန်စားဖြစ်တာကတော့ ယန်း၈၀၀ လောက်ပါ။
ယိုကိုဟားမားရာမန် (တွန်းကိုဆု နှင့် ရှောယု အမျိုးအစား)
ခေါက်ဆွဲသားအထူ ★　★　★　★　☆
စွပ်ပြုတ်ပျစ်နှုန်း(အရသာ လေးလေး) ★　★　★　★　☆
ထူးခြားချက်တော့ ဝက်သားပြားနှင့် ခေါက်ဆွဲအမာ ဖြစ်ပြီး၊ စွပ်ပြုတ်အပေါ့အငန်၊ခေါက်ဆွဲအမာအပျော့ကို သီးသန့်မှာစားလို့ရပါတယ်။ မူလအရသာကတော့ အရသာလေးလေးနှင့် ခေါက်ဆွဲခပ်မာမာ၊ဝက်သားတုံးကြီးကြီး၊ ရေညှိဖတ်၊မုန်ညင်းချဉ် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယိုကိုဟားမားထဲမှာမှ ရှိအို နာမည်ကြီးဆိုင်ရှိပါတယ်။ခေါက်ဆွဲကိုက အရသာရှိပြီး၊ စားလို့ကောင်းပါတယ်။ အရသာထဲမှာ ပုစွန်ခြောက်အရသာနဲ့ အချိုအငန် ညှိထားပြီး၊ ဝက်သားပြားနှင့် ကြက်သွန်မြိတ်၊ငရုပ်ကောင်း အရသာ၊ မီးမီးကြိုက်ကြိုက်လို့ ပြောရအောင် စားလို့မြိန်ပါတယ်။
ဟကတ ရာမန် (တွန်းကိုဆု အမျိုးအစား)
ခေါက်ဆွဲသားအထူ ★　☆　☆　☆　☆
ဝက်စွပ်ပြုတ်ရည်ရဲ့ အရသာကကို ထူးခြားပြီး၊ ကြွက်နားရွက်(ကျောက်ပွင့်)၊မုန်ညင်းချဉ်နှင့် ဝက်သား၊ ခံတွင်းတွေ့စေမှာပါ။ စွပ်ပြုတ်ရည်ထဲမှာ နှမ်းအရသာပါဝင်ပြီး အနံ့ အရသာနှင့် ပြည့်စုံတဲ့ ရာမန်လို့ ပြောပါရစေ။
ကိတကတ ရာမန် (ရှိအို အမျိုးအစား)
ခေါက်ဆွဲသားအထူ ★　★　★　★　★
စွပ်ပြုတ်ပျစ်နှုန်း(အရသာ လေးလေး) ★　★　★　☆　☆
ခေါက်ဆွဲသားထူပေမဲ့ ဆိုင်မှာသွားစားရင်တော့ နည်းနည်းသေးတဲ့ ခေါက်ဆွဲလည်း ရွေးလို့ရပါတယ်။ မငန်လွန်း မပေါ့လွန်းတဲ့ စွပ်ပြတ်ပါ။ အသားများများနှင့် ကြက်သွန်မြိတ်များများ ရောထားတဲ့ ရာမန်ပါ။
ခုမမိုတို ရာမန် (တွန်းကိုဆု)
ခေါက်ဆွဲသားအထူ ★　★　☆　☆　☆
စွပ်ပြုတ်ရည် ခပ်ပျစ်ပျစ်မှာ အသားများများ၊ ဟင်းရွက်များများပါဝင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူဆီကြက်နှင့် ငရုပ်ဆီကိုလည်း သုံးတာကြောင့် အနံ့မွှေးမွှေးလေးပေါ့။ဟင်းရွက်မှာက ကြွက်နားရွက်(ကျောက်ပွင့်)၊ဂေါ်ဖီ၊ပဲပင်ပေါက် စသဖြင့် ခေါက်ဆွဲသားကတော့ ခပ်မာမာပါပဲ။
တကရာမ ရာမန် (ရှောယု)
စွပ်ပြုတ်ပျစ်နှုန်း(အရသာ လေးလေး) ★　☆　☆　☆　☆
တကရာမ ရာမန်ကတော့ နေရာတိုင်းမှာတော့ ဆိုင်မတွေ့မိပါဘူး။ ဟိဒတကရာမ သွားလည်တုန်းက စားဖူးတာပါ။ပုံစံကတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ ရှောယုစွပ်ပြုတ်ရည်၊အသား၊ကြက်သွန်မြိတ်၊မျှစ်ချဉ်(ချဉ်တော့မချဉ်ပါဘူး)၊နာရူတို၊ရိုးရိုးလေးဆိုပေမဲ့ ခေါက်ဆွဲရဲ့ပင်ကိုယ်အရသာကိုက စားကောင်းပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲလုပ်နည်း ကွာလို့ပဲထင်ပါတယ်။
အရသာ ကတော့ နယ်မြေဒေသအလိုက် ကွဲပြားပါတယ်။ မိမိဒေသရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရသာကို ဂျပန်အနှံ့မှာ မိတ်ဆက်ကြတော့ ၊ဒေသလည်းလူသိများလာတယ်။ နိုင်ငံတွင်း ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်တာပဲပေါ့
။မြန်မာမှာတူညီတာပြပါဆိုရင် မန္တလေးမုန့်တီ၊ရခိုင်မုန့်တီ စတာတွေ ပြောရမှာပဲ။မုန့်ဖတ်ဆိုပေမဲ့ ချက်လုပ်ပုံကွဲတယ်လေ။ တခြားဒေသတွေမှာဆို မုန့်တီလို့ ဆန်မုန့်ဖတ်၊ နှင့် ဘယ်လို စားစရာတွေလုပ်စားကြလဲ မသိဘူးနော်။ ဒေသတိုင်းက နာမည်ကြီးစားစရာမဟုတ်ဘဲ၊ တစ်နိုင်ငံလုံး တူမလိုလိုနှင့် ကွဲပြားတဲ့ စားစရာ၊
(စီးပွားရေးအိုင်ဒီယာရှိရင် ရောင်းရမလားပဲ)^^ရေးတာလည်း ရှည်သွားပါပြီ။အချိန်ရရင် ရာမန်အမျိုးမျိုးစားကြည့်ကြပါနော်။
Ramen ဆိုတာ ဘာလဲ။ရှငျးရှငျးပွောရရငျ ခေါကျဆှဲရညျဖြျောလို့ ပွောရမလားပဲ။
Ramen က ဂပြနျရိုးရာအစားအစာ မဟုတျပါဘူး။‘ဂပြနျမဟုတျလား။’ လို့တှေးမိတဲ့သူလညျးရှိမှာပါ။ ဂပြနျလူမြိုးထဲမှာတောငျ ဂပြနျအစားအစာဆိုပွီး ထငျတဲ့သူတှေ ရှိပါတယျတဲ့။
ကြှနျမကိုယျတိုငျလညျး အရငျက ဂပြနျအစားအစာထဲမှာ ဘာကွိုကျလဲလို့ အမေးခံရဖူးတယျ။အဲ့တုနျးက ramen ဆိုပွီး ဖွလေိုကျတာပေါ့။ ဖွလေိုကျတော့ ramen က ဂပြနျ မဟုတျဘူးလေ လို့ ပွနျအပွောခံရဖူးပါတယျ။တကယျက တရုတျခေါကျဆှဲပွုတျကနေ အဆငျ့ဆငျ့ပွောငျးလဲလာတဲ့ Japanese soup noodles ဖွဈပါတယျ။ ပွောမယျဆို ဂပြနျမှုပွုထားတာပေါ့။
Ramen အမြိုးမြိုးရှိတာ သိပါသလား။
ဟုတျပါတယျ။ Ramen မှာ အရသာ အမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။ ဒသေအလိုကျ ရာမနျအပွငျ၊ အဓိက ကှဲပွားတာကတော့ ‘ဟငျးရညျ’ဖွဈပါတယျ။
ဟငျးရညျမှာ (၄)မြိုး ရှိပွီး
醤油ラーメン( shoyu ) ပဲငံပွာရညျ အရသာ
塩ラーメン ( shio ) ဆားအငနျ အရသာ
味噌ラーメン ( miso ) ပဲအနှဈ အရသာ
豚骨ラーメン( tonkotsu ) ဝကျရိုးပွုတျ အရသာ
ဒီလေးမြိုးအပျေါအခွခေံပွီး ဒသေအလိုကျ အနညျးငယျကှဲပွားသှားတာပါ။
ဥပမာ- tonkotsuဆိုပမေဲ့ ယိုကိုဟားမားမှာတော့ ရညှေိဖတျပိုပါပွီး၊ ဟကတမှာတော့ မုနျညငျးခဉျြပိုပါတာမြိုးပေါ့။ဒသေအလိုကျ ရာမနျတှကေို ကွညျ့ရငျ
နာမညျကွီးတာ19မြိုးတောငျ ရှိတယျနျော။ တကယျတမျး ဒီထကျပိုမြားပါတယျ။စိတျဝငျစားရငျ ရှာပွီးစားကွညျ့ကွပါ။
Ramen က ၁၄၈၈ခုနှဈမှာ chukamen (တရုတျခေါကျဆှဲ)အနနှေငျ့ ဂပြနျနိုငျငံကို စဝငျလာပါတယျတဲ့။
ထိုစဉျက သိပျမစားကွပမေဲ့၊ ကမ်ဘာစဈပွီးခတျေမှာတော့ ဒသေတိုငျးလိုလို အစားမြားလာပွီး၊ ရာမနျဆိုငျတှလေညျးပေါမြားလာတာပေါ့။ ဒသေတိုငျးမှာ တှငျကယျြလာတော့ အရသာလညျး တဖွညျးဖွညျးကှဲလာတာ။ ဂပြနျမှုပွုတာ တှငျကယျြလာတယျလို့ပွောရမှာပဲ။
နောကျပိုငျး ၁၉၅၈ခုနှဈမှာ အသငျ့စားရာမနျ ထုတျလုပျလာနိုငျပွီး(စကားမစပျ အသငျ့စားခေါကျဆှဲခွောကျထုပျပျေါလာတာက ဂပြနျက ပထမဦးဆုံး စတငျထှငျလိုကျတာပါတဲ့)၊ ဒသေတိုငျးမှာတော့ မိမိဒသေရဲ့ ဂုဏျယူဖှယျရာ အရသာမြား တီထှငျလာကွပါတယျ။ ဒသေတိုငျးလိုလို ကိုယျပိုငျအရသာ ရှိတယျနျော။
အသေးစိပျကိုသိခငျြရငျ ရာမနျပွတိုကျလညျးရှိလို့ အခြိနျရရငျ သှားကွညျ့ကွညျ့ပါနျော။ Shin-yokohamaမှာ ရှိပါတယျ။ အသငျ့စားရာမနျ ထုတျလုပျနိုငျတဲ့ ခုနှဈကတညျးက စတငျဖှငျ့လှဈခဲ့တဲ့ ပွတိုကျလေးပါ။ နာမညျက Ramen hakubutsukan (nick name က Ra-haku) ပါတဲ့နျော။
ရာမနျ ကို အစားမြားဆုံးက ဘယျသူတှမြေား ဖွဈမလဲ။
အစားမြားတာကတော့ ကုမ်ပဏီဝနျထမျးတှမြေားပါတယျ။ မွနျလညျးမွနျပွီး အရသာရှိတဲ့အပွငျ စြေးနှုနျးကလညျး ယနျး၁ဝဝဝအောကျ ဖွဈပါတယျ။ စားရတာ တနျတယျလေ။ထူးဆနျးတာတဈခုက ရာမနျဆိုငျသှားတိုငျးတှေ့ ရတာက ယောကျြားလေးတှေ မြားတာပါပဲ။ salary-man တို့ အကွိုကျလို့ ပွောရမှာပေါ့နျော။
ကြှနျုပျ စားဖူးသော ရာမနျ!
ကြှနျမကတော့ နလေ့ညျစာနှငျ့ ညစာမှာ ရာမနျသှားစားလရှေိ့ပါတယျ။ ဘယျဆိုငျမဆို ယနျး၁ဝဝဝအောကျ ကုနျကပြွီး၊ ပုံမှနျစားဖွဈတာကတော့ ယနျး၈၀၀ လောကျပါ။
အရသာလေးနဲ့အတူ အဆငျ့ တှဲပွောသှားမယျနျော
ယိုကိုဟားမားရာမနျ (တှနျးကိုဆု နှငျ့ ရှောယု အမြိုးအစား)
ခေါကျဆှဲသားအထူ ★　★　★　★　☆
စှပျပွုတျပဈြနှုနျး(အရသာ လေးလေး) ★　★　★　★　☆
ထူးခွားခကျြတော့ ဝကျသားပွားနှငျ့ ခေါကျဆှဲအမာ ဖွဈပွီး၊ စှပျပွုတျအပေါ့အငနျ၊ခေါကျဆှဲအမာအပြော့ကို သီးသနျ့မှာစားလို့ရပါတယျ။ မူလအရသာကတော့ အရသာလေးလေးနှငျ့ ခေါကျဆှဲခပျမာမာ၊ဝကျသားတုံးကွီးကွီး၊ ရညှေိဖတျ၊မုနျညငျးခဉျြ ပဲဖွဈပါတယျ။
ယိုကိုဟားမားထဲမှာမှ ရှိအို နာမညျကွီးဆိုငျရှိပါတယျ။ခေါကျဆှဲကိုက အရသာရှိပွီး၊ စားလို့ကောငျးပါတယျ။ အရသာထဲမှာ ပုစှနျခွောကျအရသာနဲ့ အခြိုအငနျ ညှိထားပွီး၊ ဝကျသားပွားနှငျ့ ကွကျသှနျမွိတျ၊ငရုပျကောငျး အရသာ၊ မီးမီးကွိုကျကွိုကျလို့ ပွောရအောငျ စားလို့မွိနျပါတယျ။
ဟကတ ရာမနျ (တှနျးကိုဆု အမြိုးအစား)
ခေါကျဆှဲသားအထူ ★　☆　☆　☆　☆
စှပျပွုတျပဈြနှုနျး(အရသာ လေးလေး)　★　★　★　★　☆
ဝကျစှပျပွုတျရညျရဲ့ အရသာကကို ထူးခွားပွီး၊ ကွှကျနားရှကျ(ကြောကျပှငျ့)၊မုနျညငျးခဉျြနှငျ့ ဝကျသား၊ ခံတှငျးတှစေ့မှောပါ။ စှပျပွုတျရညျထဲမှာ နှမျးအရသာပါဝငျပွီး အနံ့ အရသာနှငျ့ ပွညျ့စုံတဲ့ ရာမနျလို့ ပွောပါရစေ။
ကိတကတ ရာမနျ (ရှိအို အမြိုးအစား)
ခေါကျဆှဲသားအထူ ★　★　★　★　★
စှပျပွုတျပဈြနှုနျး(အရသာ လေးလေး)　★　★　★　☆　☆
ခေါကျဆှဲသားထူပမေဲ့ ဆိုငျမှာသှားစားရငျတော့ နညျးနညျးသေးတဲ့ ခေါကျဆှဲလညျး ရှေးလို့ရပါတယျ။ မငနျလှနျး မပေါ့လှနျးတဲ့ စှပျပွတျပါ။ အသားမြားမြားနှငျ့ ကွကျသှနျမွိတျမြားမြား ရောထားတဲ့ ရာမနျပါ။
ခုမမိုတို ရာမနျ (တှနျးကိုဆု)
ခေါကျဆှဲသားအထူ ★　★　☆　☆　☆
စှပျပွုတျရညျ ခပျပဈြပဈြမှာ အသားမြားမြား၊ ဟငျးရှကျမြားမြားပါဝငျပါတယျ။ ကွကျသှနျဖွူဆီကွကျနှငျ့ ငရုပျဆီကိုလညျး သုံးတာကွောငျ့ အနံ့မှေးမှေးလေးပေါ့။ဟငျးရှကျမှာက ကွှကျနားရှကျ(ကြောကျပှငျ့)၊ဂျေါဖီ၊ပဲပငျပေါကျ စသဖွငျ့ ခေါကျဆှဲသားကတော့ ခပျမာမာပါပဲ။
တကရာမ ရာမနျ (ရှောယု)
ခေါကျဆှဲသားအထူ　★　★　☆　☆　☆
စှပျပွုတျပဈြနှုနျး(အရသာ လေးလေး)　★　☆　☆　☆　☆
တကရာမ ရာမနျကတော့ နရောတိုငျးမှာတော့ ဆိုငျမတှမေိ့ပါဘူး။ ဟိဒတကရာမ သှားလညျတုနျးက စားဖူးတာပါ။ပုံစံကတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ ရှောယုစှပျပွုတျရညျ၊အသား၊ကွကျသှနျမွိတျ၊မြှဈခဉျြ(ခဉျြတော့မခဉျြပါဘူး)၊နာရူတို၊ရိုးရိုးလေးဆိုပမေဲ့ ခေါကျဆှဲရဲ့ပငျကိုယျအရသာကိုက စားကောငျးပါတယျ။ ခေါကျဆှဲလုပျနညျး ကှာလို့ပဲထငျပါတယျ။
အရသာ ကတော့ နယျမွဒေသေအလိုကျ ကှဲပွားပါတယျ။ မိမိဒသေရဲ့ ကိုယျပိုငျအရသာကို ဂပြနျအနှံ့မှာ မိတျဆကျကွတော့ ၊ဒသေလညျးလူသိမြားလာတယျ။ နိုငျငံတှငျး ယဉျကြေးမှု ဖလှယျတာပဲပေါ့။
မွနျမာမှာတူညီတာပွပါဆိုရငျ မန်တလေးမုနျ့တီ၊ရခိုငျမုနျ့တီ စတာတှေ ပွောရမှာပဲ။မုနျ့ဖတျဆိုပမေဲ့ ခကျြလုပျပုံကှဲတယျလေ။ တခွားဒသေတှမှောဆို မုနျ့တီလို့ ဆနျမုနျ့ဖတျ၊ နှငျ့ ဘယျလို စားစရာတှလေုပျစားကွလဲ မသိဘူးနျော။ ဒသေတိုငျးက နာမညျကွီးစားစရာမဟုတျဘဲ၊ တဈနိုငျငံလုံး တူမလိုလိုနှငျ့ ကှဲပွားတဲ့ စားစရာ၊
(စီးပှားရေးအိုငျဒီယာရှိရငျ ရောငျးရမလားပဲ)^^ရေးတာလညျး ရှညျသှားပါပွီ။
Previous Previous post: တူမလိုနဲ့ ကွဲတဲ့ လုပ်ငန်းသုံးဂျပန်စာ 貴社( kisha)、御社 (Onsha )、弊社(heisha)、当社 (tousha)
Next Next post: သိထားသင့်သော ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အလုပ်ဥပဒေတစ်ချို့